Otu esi etinye Tor Browser na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Wụnye Tor Browser na APT nwere Tor Repository (A kwadoro)
Wụnye Tor Browser na APT Default Repository
Wụnye Tor Browser Iji Aka
Mwepụta nwụnye Tor Browser
Otu esi ebido & hazie Tor Browser
Tor, bụkwa nke a maara dị ka Na yabasị rawụta, bụ ebe mepere emepe, ngwanrọ efu na na-enyere aka nkwurịta okwu na-amaghị aha mgbe ị na-eji ọrụ ịntanetị dị ka sọfụ webụ. Netwọk Tor na-eduzi okporo ụzọ ịntanetị site na netwọk ọrụ afọ ofufo nwere ike ịnweta n'ụwa niile nwere ihe karịrị puku relays isii ma na-aga n'ihu na-eto eto. Ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ ụzọ ọzọ ha ga-esi dobe ozi na ihe omume ha n'amaghị ama ma ọ bụ opekata mpe dị ka o kwere mee, nke butere Tor Browser na-eto nke ọma n'afọ ndị na-adịbeghị anya ka ọ na-ezochi ọnọdụ onye ọrụ na ojiji ya n'aka onye ọ bụla na-eduzi nyocha netwọkụ ma ọ bụ nyocha okporo ụzọ. .
N'ime nkuzi na-esote, ị ga-amụta ka esi etinye ihe nchọgharị Tor ọhụrụ na Ubuntu 20.04.
Site na ndabara, mgbe ị mepụtara akaụntụ gị na mmalite na Debian ma e jiri ya tụnyere nkesa ndị ọzọ, ọ naghị enweta ọkwa sudoers ozugbo. Ị ga-enwerịrị ike ịnweta ya mgbọrọgwụ paswọọdụ iji iwu su ma ọ bụ gaa na nkuzi nkuzi anyị Otu esi etinye onye ọrụ na Sudoers na Ubuntu.
Ụzọ kachasị mfe na kacha mma iji wụnye na idobe Tor Browser dị ọhụrụ na nhọrọ ndị edepụtara na nkuzi bụ ịmepụta na wụnye Tor Browser site na ebe nchekwa ọrụ. Nke a ga-apụta na ị ga-anọ na ụdị kwụsiri ike kachasị ọhụrụ mgbe niile, ọ gaghịkwa adị gị mkpa iji aka budata ma wụnye mmelite n'ọdịnihu nke nwere ike ịgwụ ike ma sie ike maka ndị novice na ndị ọrụ Linux ọhụrụ.
Mbụ, wụnye ndabere; ọ bụrụ na ejighị n'aka, mee iwu ahụ; ọ gaghị eme ihe ọjọọ.
Bubata igodo GPG ka nrụnye agaghị ebute njehie GPG.
Ọzọ, bubata ihe ebe nchekwa alaka ụlọ ọrụ kwụsiri ike na-eji iwu ọnụ ọnụ.
Ọ bụrụ na-amasị gị ihe na-akpụ akpụ karịa ụdị Tor Browser kwụsiri ike, ị nwere ike ibubata ebe nchekwa nnwale ma ọ bụ nke abalị. Rịba ama, e kwesịghị ịtụ anya na ndị a ga-arụ ọrụ nke ọma ka ịdọ aka ná ntị kwụsiri ike.
Bubata ebe nchekwa alaka ụlọ ọrụ nnwale:
Bubata ebe nchekwa alaka na-ebubata kwa abalị:
Ugbu a melite ndepụta nchekwa gị iji gosipụta mgbakwunye ọhụrụ wee wụnye Tor Browser.
Kwado nrụnye site na ịlele ụdị ihe nchọgharị Tor dị ka ndị a:
Ihe atụ mmepụta alaka kwụsiri ike:
Ọmụmaatụ mmepụta mmepụta abalị (iche):
Ka e were ya na ị lelee akụkụ nke abụọ nke nkuzi ịwụnye site na ebe nchekwa ndabere APT. N'okwu ahụ, nke a dị nnọọ n'ihu ma bụrụ ụdị Tor siri ike kachasị ọhụrụ dị ma ọ bụrụ na i jiri nhọrọ nke atọ wee wụnye ụdị ọhụrụ ahụ na aka gị.
Na ndabara, Tor Browser na-abịa na ebe nchekwa ndabere nke Ubuntu 20.04. A na-akwado ịwụnye ụdị a. O nwere ike bụrụ ihe ochie; Agbanyeghị, Tor Browser ka na-emelite maka ihe egwu nchekwa kachasị ọhụrụ.
Iji wụnye Tor, mee iwu a:
Nhọrọ nke abụọ nke nrụnye bụ ịwụnye Tor Browser site na iji ebe nchekwa kachasị ọhụrụ sitere na ibe nbudata. N'oge nkuzi a, ụdị 10.5.6 bụ nke kachasị ọhụrụ; Otú ọ dị, n'ọdịnihu, nke a ga-agbanwe, jide n'aka na ị ga-enweta ụdị emelitere.
Site na ndabara, wget kwesịrị itinye nke a. Ọ bụrụ na-efu, jiri iwu a:
Jiri wget iwu ozugbo ị nwere nke kachasị ọhụrụ .mgb njikọ dị ka ndị a:
Mara, na -ngwa ngwa ọkọlọtọ bụ maka ịmepụta njikọ Tor Browser na menu ngwa gị.
Ugbu a Tor Brower ga-apụta na gị Ogwe ọrụ > Gosi ngwa > Tor Browser.
Ọtụtụ ndị ọrụ ga-eji Jikọọ; Agbanyeghị, ntọala Tor Network nwere ike iji ntọala proxy maka mba ndị dị ka China, Egypt na Turkey, ịkpọ aha ole na ole ebe amachibidoro iji ọrụ dị otú ahụ. Biko hụ na ị naghị emebi iwu ọ bụla site na iji nke a. Ịgafe n'ụfọdụ mba ndị a nwere ike itinye gị na nsogbu siri ike.
Mgbe ị na-eji Tor Browser, kama iji webụsaịtị mgbe niile, ị nwere ike họrọ iji akụkụ nke ọrụ ịntanetị nke Tor Network. Webụsaịtị ndị ahụ, agbanyeghị, ga-adịrịrị n'ụdị a, ma ọ bụrụ na ha dị, ha na-eji a .yabasị okwu.
Maka ndị na-amaghị ọrụ yabasị, ha bụ ọrụ netwọk na-amaghị aha nke ekpughere na netwọk Tor. N'adịghị ka ọrụ ịntanetị a na-emekarị, ọrụ yabasị bụ nke nzuzo, n'ozuzu adịghị akọwapụta ya site na njin ọchụchọ, ma na-eji aha ngalaba na-akwado onwe ya ogologo na mgbagwoju anya maka ụmụ mmadụ ịgụ.
Biko mara na Tor ekwesịghị ịbụ ihe mkpali ma ọ bụ nhọrọ iji webụ ma ọ bụ ọrụ gbara ọchịchịrị na-emebi iwu obodo ọ bụla.
Categories Ubuntu Tags Ihe nchọgharị TOR, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo
Otu esi etinye ma jiri mmanya na Ubuntu 20.04 na 21.04
2 echiche na "Otu esi etinye Tor Browser na Ubuntu 20.04"
October 28, 2021 na 10: 09 pm
post kacha mma m hụtụrụla na mpaghara
October 28, 2021 na 10: 22 pm
Daalụ solzararef 🙂